के तपाईँ आफ्नो पाट्नरको यौन व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? - Nayabulanda.com
के तपाईँ आफ्नो पाट्नरको यौन व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
तपार्इँको पाटनरको सेक्सपावर बढाउने उपाय हामी बताउछौँ ।
नयाँ बुलन्द ९ चैत्र २०७५, शनिबार १०:३१ 151 पटक हेरिएको
एजेन्सी : के तपाईँ आफ्नो पाट्नरको यौन व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न ? के पाटनरको यौनमामिलामा कमजोर ठान्नुभएको छ ? अनि भन्न सकिरहनु भएको छैन ? त्यसो हो भने अव नआत्तिनुस । तपार्इँको पाटनरको सेक्सपावर बढाउने उपाय हामी बताउछौँ ।
बैज्ञानिकहरुको अनुसार टेस्टोस्टेरोन हार्मेनले महिला एडरेनल ग्लैण्ड र डिंवासयमा सकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्छ । जसले उनीहरुमा सेक्स गर्ने इच्छा बढाउछ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार १५ दिन लगातार जुस खादा टेस्टोस्टेरोनको स्तर १६ प्रतिशत बाट बढेर ३० प्रतिशत सम्म पुगेको पाइएको थियो ।nepalihealthबाट